PCB hentitra - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax - Mifantoha amin'ny fanamboarana birao vita pirinty vita pirinty sy serivisy PCB Assembly Turnkey, kalitao avo, vidiny ambany, fandefasana haingana ary fandefasana mora ho an'ny mpanjifa manerantany.
Ny haben'ny vokatra PCB Rigid izay azon'i Fumax atolotra：
* PCB miaraka amin'ny sosona 48
* Alu core, misy ihany koa ny plate-through
* Microvias avy amin'ny 75µm
* Amin'ny alàlan'ny fametrahana / fametrahana
* Layer, sosona 2-40） ；
* Haben'ny PCB （Min. 10 * 15mm, Max.508 * 889mm） ；
* Ny hatevin'ny birao （0.21-6.0mm） ；
* Ny hatevin'ny varahina Min （1/3 OZ (12um)） ；
* Max matevina vita amin'ny varahina （6 OZ） ；
* Min sakan'ny soritra / elanelana layer sosona anatiny: fizarana 2 / 2mil, ankapobeny 3 / 3mil; Sosona ivelany: Fizarana 2.5 / 2.5mil, ankapobeny 3 / 3mil） ；
* Fandeferana ny refy refy （± 0.1mm）;
* Fitsaboana ambonimbony （HASL / ENIG / OSP / MITARIKA MAIMAIMPOANA / FANETRASANA EMASIONA / FIVORIANA Ag / IMMERSION Sn） ；
* Fandeferana fanaraha-maso Impedance （± 10%, 50Ω ary ambany: ± 5Ω） ；
* Saron-tava solder （maintso, manga, mena, fotsy, mainty）.
hentitra Birao boribory vita pirinty manolotra fitomboan'ny fizaran-tany ary afaka mampihena ny habeny sy ny lanjan'ny tabilao. Izany no mahatonga ny maro orinasa elektronika eto amin'izao tontolo izao ampiasao ireo takelaka ireo amin'ny fitaovana sy gadget elektronika maro. Ny habe matevina, ny tsimatimanota amin'ny fivezivezena ary ny fikojakojana mora dia mahatonga ny PCBs henjana ho vokatra tsara ho an'ny fampiharana isan-karazany. Ilaina manokana izy ireo amin'ny indostria izay mila amboarina ireo singa, ary mila miatrika ny adin-tsaina amin'ny fampiharana, sy ny mari-pana miakatra.
* Elektronika elektronika sy mandeha ho azy: PCB henjana dia azo ampiasaina hanohanana ny fampiharana maivana ary koa ny adidy mavesatra. PCB multilayered azo ampiasaina hanome impedance voafehy sy mamorona fifandraisana nalevina. Ny PCB adidy mavesatra dia azo ampiasaina hanohanana ireo rindranasa misy herinaratra avo sy matetika. . Ny ohatra amin'ny fampiharana automatique dia misy ny robotika, ny entona ary ny mpanindry tsindry, ny kojakoja mifantina sy ny toerana ary ny mpamono heno.
* Fitsaboana: Na dia malaza eo amin'ity sehatra ity aza ny boribory malefaka, ny PCB henjana koa dia manana toerana amin'ny fampiharana ara-pitsaboana. Ampiasaina indrindra ho an'ireo fitaovana lehibe sy tsy azo entina izy ireo. Ohatra amin'izany ny fitaovan'ny tomography, ny milina Electromyography (EMG), ary ny rafitra Magnetic Resonance Imaging (MRI).
* Aerospace: ny indostrian'ny aerospace dia misy tontolo iainana sarotra sy avo lenta. Ny PCB henjana dia mety ho mora ampiasaina eto, satria azo foronina amin'ny alàlan'ny vongan-tanimanga sy alimina, ary laminaty avo lenta. Ny ohatra amin'ny fampiharana aerospace dia misy ny Unit Auxiliary Power Units (APUs), ny fitaovana fiaramanidina fiaramanidina, ny mpanova herinaratra, ny sensor sensor ary ny rafitra fanaraha-maso ny tilikambo.
* Automotive: PCB henjana dia hita amin'ny fiara antonony sy lehibe. Toy ny fampiharana aerospace, ny PCB dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny vongan-tanety avo sy alimina. Ny laminatà hafanana ambony dia azo ampiana hiarovana amin'ny hafanan'ny motera sy ny loto amin'ny tontolo iainana. Ny PCB automotive dia azo amboarina avy amin'ny varahina vita amin'ny plastika ihany koa ho fanatsarana ny mateza. Ny PCB henjana dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana toy ny mpanova herinaratra AC / DC, Units Computer Electronic (ECUs), sensor sensor, ary boaty fihaonan'ny herinaratra.